UMnu Ukuthula Rocks kwi Piscine Global Europe 2018 - Aquark Electric Co., Ltd
Rocks uMnu cwaka kwi Piscine Global Europe 2018
Merci de bomthonyama avoir honorés de votre ebusweni.
Singathanda ukubulela bonke abaxhamli beenkonzo zethu kunye namaqabane zoshishino ezityeleleyo ukuma kwethu kwi Piscine Global Europe 2018, i-international mboniso professional inkulu kwi swimming pool noshishino ntle.
Lo mboniso yaba yimpumelelo enkulu, oko kwasinika ithuba lokubonisa ihlabathi iimpompo Aquark kaThixo ezintsha inverter pool ubushushu, ngokunjalo R lwethu olomeleleyo & D izakhono kunye nomgangatho wemveliso ophezulu. Siye uhlolwa yamathuba emakethe abaliqela, Okwangoku, nathi waziva utshintsho olukhulu emarikeni.
technology Inverter ulahlekisa amaxesha. Xa kujongwa ukhuphiswano yoontanga, sekunjalo Aquark uyakhokela buchwepheshe. Kwamenywa nabenzi pump ubushushu pool yaseTshayina inxaxheba kulo mboniso, kodwa Aquak kaThixo UMnu cwaka na impompo bushushu ezintsha kwaye ASIVELELAYO yonke. Yeyona inverter yoyilo ekubhalwe lokuqala nomoya yomsinga pump ubushushu pool ekhethekileyo kushishino pool. A lot of iinkonzo zobungcali babonisa umdla omkhulu. Siyazingca ngokuba iimveliso zethu ndizuze ingqalelo ehlabathini lonke, nto leyo ngakumbi kakhulu ithemba lethu of R & D.
Innovation akayeki. Ngenxa ngcungela iteknoloji, siya kuqhubeka umnikelo uyilo creative for best amava umthengi. Positioning nanjengamntu undithatha njengesihlobo Global OEM, nako ukunika Ukudizayina Aquark njengoko kwakunye kuyilo elungelelanisiweyo thina. Okwangoku, siye uluhlu Inverter iimpompo ezipheleleyo ubushushu pool for okukhethayo. Ukuba ungathanda ukufumana ukwazi okungakumbi iqela lethu uze ufunde oko entsha Aquark, landela us on LinkedIn ,Facebook no -Twitter.
ixesha Post: Nov-27-2018